လတ်တလော ဧရာဝတီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » လတ်တလော ဧရာဝတီ	36
Posted by ဇီဇီ on Feb 21, 2016 in Creative Writing, Environment, My Dear Diary, Photography | 36 comments
ဖေဖော်ရီ ၁၂ ရက်နေ့ က စစ်ကိုင်းးတောင်ဘက်သွားးရင်းး
အမြင့်ဆုံးး ပတ္တမြားစေတီ ပေါ်က ရှုခင်းတွေ က လှ တယ်ဆိုတာနဲ့ ရောက်သွားးတယ်..
သောင်ကျွန်းးအစွယ်စွယ်နဲ့ ဧရာဝတီ ကို မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာခဲ့ဘူးးး
ရှေ့ လျှောက် အရမ်းပူရင် ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်.. လူလူချင်းးတောင် အဆက်မပြတ် ကယ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ဧရာဝတီကို ကယ်ဖို့ ဘယ် အပူကပ်ရပါ့…!!
ကိုယ်လည်းး မကယ်နိုင်မယ့် တူတူ တောင်ပေါ်ကဆင်းး သောင်ပြင်ပေါ်သွားး ပြီးး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့သေးးးး… ဒီပို့ စ်မတော့ မပြတော့ပါဘူးးနော့ ..!!
ဧရာဝတီ က ပို သနားးစရာကောင်းးသွားးမစိုးးလို့ ???
ဈာန်​ says: ဓတ်​ပုံး​လေး​တွေ သ​ဘောကျလွန်းလို့ အလှူခံပါရ​စေ
ခင်ဇော် says: ရပါတယ် ယောက်ခမ။
သင့်အေးရိပ် says: ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး သဘောကျလွန်းလို့….
ဧရာဝတီကိုတောင် သနားဖို့ မေ့သွားတယ်… ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: မမဂျီး ရဲ့ သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ ဟင်္သာပုံလေးဒွေရော
kai says: ဧရာဝတီဖြည်းဖြည်းချင်း သေသွားမှာပါ…။ ဘေးဝန်းကျင်ကလူတွေပါ ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်..
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြီးမှဆိုရင်တော့.. ထိုးခံလိုက်ရမယ်ဖြစ်ချင်း.. လက်ညိုး.. လက်ညိုး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: ခုတော့ တဂျီးကို မက်စောင်း အရင်ထိုးသွားပါတယ်။
Kaung Kin Pyar says: ပုံ ၄ ကိုကြေည့်တော့ သောင်တွေ အတော်ထွန်းနေပြီ… ဒါတောင် အယ်လ်နီညိုကြီး သေချာရောက်မလာသေးဘူး… သောင်ပြင်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေမယ် လူပုံရော ဒီပုံတွေရော လှတယ်….။ ခရီးထွက်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်သွားတယ်…
မင်းသားကြီးမရှိတာ သတင်းကြားထားလို့ ဒီဘက်လာချောင်းတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: အဲဒီ နား က ကောတော့မယ်ထင်တယ် စမီးရေ။
ပဲခင်း ပြောင်းခင်းတွေတော့ စိမ်းစိုနေတာ အားဂျီးပဲ။
HMM says: မချိုးခဲ့ဘူးလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: ဟမ်။
ဟိ။ အာ့နဲ့ ဓာတ်ပုံပဲ ရိုက်ခဲ့တယ်။
Was this answer helpful?LikeDislike 154
HMM says: ပြောင်းမရ ရေချိုးပြန်ခဲ့ပေါ့ Was this answer helpful?LikeDislike 154
HMM says: မှန်းဆဖူးတဲ့ ဧရာဝတီနဲ့မတူစွတကား…
ခင်ဇော် says: တံတားအောက်မှာတော့ သောင်မရှိပါဘူးး
ခု လို တောင်ပေါ်ကကြည့်မှ သောင်တွေ မြင်ရတာ။
HMM says: နီညိုဒေလာရင် မြစ်ရေကြီးမယ်ကြားတယ်
Ma Ma says: သင့်အေးရိပ် ပြောသလိုပဲ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ လှနေတော့ ဧရာဝတီကို သနားဖို့ မေ့သွားတယ်။
ခင်ဇော် says: အပြင်မှာလည်း လှတယ် ချစ်မ။
သောင်ပေါ် လမ်းလျှောက်ရတာ လေ တဖြူးဖြူး နဲ့ အေးလို့။
Ma Ei says: ပုဂံ လောကနန္ဒာဆိပ်နဲ့ သောင်ပြင်ပေါ်ကရွာကလေးဆီ
လှေကလေး ခေါက်တုန့်ပြန်သွားနေတာရယ် ငှက်ကလေးတွေ ပျံသွားနေကြတာ
ထိုင်ငေးရင်း ဧရာဝတီကို အလှကြည့်လို့ကို မ၀ခဲ့ဘူး….
နောက်ခေါက်သွားရင်တော့ လှေလိုက်စီးမယ် သောင်ပြင်ကို လည်လည်သွားမယ်
ဆွိ လို ဓာတ်ပုံရိုက်ဦးမယ်
ခင်ဇော် says: ပုဂံ ဧရာဝတီတော့ ပူလို့ မဆင်းခဲ့ရဘူး မွအိရေ။
စစ်ကိုင်းမတော့ တောင်ပေါ်က အဆင်း နေအေးတုန်းရယ် နေမဝင်ခင်ရယ် အမှီပြေးရတာ။
အမှိုက်ပုံတွေရော ပြောင်းခင်းတွေရော ရွာအပြင်က ဖြတ်ရတာ ဖိနပ်အမြင့်နဲ့မို့ ချွတ်ကိုင်ပြီး သွားကြတာ။
နောက်ခါဆို ဓာတ်ပုံပဲ ရိုက်ခဲ့။
uncle gyi says: စစ်အစိုးရလက်ထက်တလျှောက်အထက်ဖက်ရွှေတူးတာခေတ်စားပြီး
ကျောက်စိမ်းခေတ်ထပြီးအကြီးအကျယ်တူးကြတာ
မျက်တောင်တထောက်လောက်ကြည့်ပြီးလိုင်စင်တွေချပေးတဲ့အကျိုးဆက်တွေ
လုပ်ခွင့်ချပေးသူကစဉ်ချင်ရမှာ
ခင်ဇော် says: သောင်တူးတာတွေ ဘာတွေရော လုပ်လို့ မရတော့ဘူးလားမသိဘူးနော်။
naywoon ni says: ​သောင်​တူးစက်​က တရုပ်​ဆီက အမိန့်​မရဘဲ ​မောင်းမရဘူးတဲ့ဗျာ ကြားဖူး နားဝ ၀င်​​ပြောသွားသီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: ငင်..??
အောင် မိုးသူ says: လှတယ်နော်
ခင်ဇော် says: လှတော့ လှပါတယ်..
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဓါတ်ပုံတွေတကယ်လှတယ်…အော်..ဧရာဝတီ…ရာဇ၀င်များရဲ့သတို့သမီး….
ခင်ဇော် says: သတို့သမီးး အို ကြီးး ပေါ့ မိုက်မိုက်ရယ်..
Mr. MarGa says: ပတ္တမြားစေတီကို မြင်တော့
ပတ္တမြားစေတီ ဘုရားပွဲကို သွား သတိရ..
(နားကြားနဲ့ လွမ်းခဲ့ရတဲ့ ပွဲ -_- )
ခင်ဇော် says: ဘုရားးပွဲ က ဘယ်လတုန်း ဟ
kotun winlatt says: ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီးဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို နားဆင်ရင် အခု ပုံတွေ စာတွေကို ကြည့်ဖတ် ဖတ်ကြည့်သွားပါတယ် ခမျ
ခင်ဇော် says: ကျေးးဇူးးတင်ပါတယ် ခည..!!
Swal Taw Ywet says: ဧရာ ၀တီ ကမ်းက မီးပုံးပြန် များမြင်ရမလားလို့ ၀င်လာတာ။
ရွာထဲ ၀င်ဘို့ စည်းရုံးထားတဲ့ မုံရွာဆင်း တပည့်မနဲ့	သူ့အမ Register လုပ်ရာမှာ အခက်တွေ့နေတယ်ဆိုတာလေးလည်း အော်ရင်းပေါ့။
သိသလောက် ဧရာမြစ်ကြောင်းကို သတ်တဲ့အထဲ မြစ်ကူးတံတားတွေလည်းပါလိမ့်မယ်။
အရင် မုံရွာမှာ ငှါးနေခဲ့ရတဲ့ အိမ်ပိုင်ရှင်က ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးမှာ ခု ညွှန်မှူးဖြစ်နေပြီ။ မြန်မာ အယောက် ၃၀ လောက် ကို တရုပ်မှာခေါ်ပြီး ၁၈လကြာ သင်တန်းပေးထားခဲ့တာတော့ သိတယ်။
သူနဲ့ စကားပြောဖြစ်တုံး သူညည်းခဲ့တာက စစ်အစိုးရ လက်ထက် လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားခဲ့တဲ့ ချောင်းပိတ် မြောင်းပိတ် ဆည်ပေါက်စနတွေနဲ့
ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားက ဥရုချောင်း ( ဟိုးရှေးရှေးတုံးက ဥရုမြစ်လို့ ခေါ်သတဲ့ )
အခု မြောင်းသာသာဘဲ ကျန်တော့ရဲ့။
ရွှေမကျင်နဲ့ ကျောက်မတူးတော့နဲ့ဆို အဲဒီလုပ်ငန်းထဲက သိန်းချီတဲ့ လုပ်သားတွေကို ဘယ်လိုစီမံမလဲဆိုတာ အရင်ပြင်ထားမှ ရမယ်။
ရွာထဲ ၀င်ရတာ ပျော်သဗျာ။
ခင်ဇော် says: ဒီ အစိုးမရ ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲ နေပုံ က
ဦးးကနင်းရင် ပဲ့ ကထောင်
ပဲ့ကနင်းရင် ဦးကထောင် နဲ့ ပတနာ ကို ပတ်လည်နေသလိုပဲ..
kai says: မနေ့ကတီဗီသတင်းထဲ.. ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ပြည်ရဲ့ မြစ်တွေ… တစုံတပြုံကြီးသေကုန်ကြတဲ့အကြောင်းပြသွားတယ်..။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအ၀င်.. ဆည်ဆောက်ရေဆည်စီမံကိန်းတွေ.. ၁၀ဆ(၁၀ဆ)တိုးမလုပ်ရင်.. မိခင်ဧရာဝတီအပါအ၀င်.. မြန်မာပြည်မြစ်တွေအတွက်.. သေမင်းလည်း… မကြာမှီလာတော့မည်… မျှော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1163
hmee says: ငယ်ငယ်တုန်းက တကူးလဆို ဆင်ဖြူတောင်ဘုရားပွဲရှိတယ် နှစ်တိုင်းဘုရားပွဲသွား ဆင်ဖြူတောင်ဘုရားပေါ်က စ္စ်တောင်းမြစ်ကို မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ သိပ်တူတယ်။ အခုတော့ သည် စ စ်တောင်းမြစ်လည်း အဝေရာဆည်ကြောင့် သဘာဝ အလှတရားတွေ အကုန်ပျောက်ကုန်ပြီ။ ။ နွေရာသီ သောင်တွေ ပေါ်ရင်က္က်ြသွန်စိုက်တဲ့ ဓလေ့ပါပျောက်ကုန်ပါရောကွယ် အရင်လို မလှတော့တာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး
ခင်ဇော် says: ဂေဟ စံနစ် ပျက်စီးတယ်ခေါ်သလားမသိ။
naywoon ni says: ဧရာဝတီက ရာဇ၀င်​ထဲ ပြန်​​ရောက်​သွား​တော့မယ်​ထင်​ရဲ့ ​လောဘရဲ့ အကျိုးဆက်​လို့ပဲ​ပြောရမလား ¿¿¿